गाडी किन्दा अफर मात्र हैन भबिस्यको प्रतिफल र आरामदायी सुविधा हेर्नुपर्छ - Arthikbazar.com
अटो क्षेत्रमै एक दशक जागिरे जीवन बिताएर ब्यबसायिक यात्रामा लागि अटो क्षेत्र नै आफ्नो कर्म थलो बनाउनु भएकाजी. मोटर्स प्रा. ली. का प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ कैलाश बाबु गेलाल। जागिर खाएर आफ्नो भविष्य राम्रो बनाउने भन्दा पनि अरुलाई पनि रोजगारी सृजना गरि अटो क्षेत्रमा लाग्नु भएका गेलाल हाल दुई वटा ब्रान्डका गाडी बेचिरहनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ अटो मोवाइल क्षेत्र मेरो नशा र रगतमा छ , म यो क्षेत्र कदापि छोड्न सक्दिन । अहिले जी मोटर्सका ३ वटा सोरुम छन् । यहाँ प्रस्तुत छ जी मोटर्सको बजार हिस्सा , ग्राहकलाई दिने सुविधा र दशैँ तिहारको अफर बारे प्रबन्ध निर्देशक गेलालसंग आर्थिक बजार डटकमका लागि अप्सरा गौतम र प्रकाश सापकोटाले गरेको कुराकानी :
तपाईको जी मोटर्स सम्मको यात्रा बारेमा बताइदिनुस न ?
म अटोमोवाइल क्षेत्रमा लागेको एक दशक भयो । मैले सिप्रिदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.मार्फत करियर सुरु गरेको हु । जुनियर सेल्स अफिसरको रुपमा मैले काम सुरु गरे ।दशक सिप्रिदिमा बिताएपछि मैले एउटा संस्था खोलेर काम गर्न सक्छु , जागिर खाने हैन जागिर दिन्छु भन्ने लागेर १ वर्ष अगाडि G. Motors दर्ता गरेर काम सुरु गरेको हुँ ।
G. Motors को बजार कस्तो छ ?
छोटो समयमै यो संस्था निकै बलियो संस्थाको रुपमा परिचित भएको छ । अहिलेको समयमा रेनो र फोर्स गाडीलाई संगसंगै लिएर जाँदा हामी एक प्रतिष्ठित संस्थाको रुपमा वजारमा आइसकेका छौं । जी मोटर्स फ्रान्सको रेनो ब्राण्ड र भारतमा निर्मित फोर्स ब्राण्ड गाडीको उपत्यकाकै पहिलो आधिकारिक डिलर हो । रेनो मुख्यत प्राइभेट कार हो । फोर्स मुख्यत कमर्सियल गाडीको उत्पादन हो । अहिले हाम्रोे गठ्ठाघर, सल्लाघारी र इटहरीमा सोरुम छन् ।
कत्तिको माग भैरहेको छ ?
प्राइभेट कारमा रेनो एक प्रतिष्ठित कार हो । जसमा हामीसंग रेनोको – Kwid, Duster, Lodgy and Captur र फोर्सको Kargo King pickup, Cruiser jeep, Gurkha SUV, Traveller Bus, Delivery Van and Tractor छ । यी गाडीहरु हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रोसंग विक्री भैरहेको छ । सल्लाघारीबाट रेनो व्राण्डलाई र गठ्ठाघरबाट फोर्स गाडी बिक्री गरिरहेका छौ । यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । ग्राहकको नजरले हेर्दा पनि यी गाडी एकदमै आकर्षक मूल्य र आकर्षक छुटमा पाइरहनु भएको छ । यसमा ग्राउण्ड क्लियरेन्स, रिभर्स क्यामेरा, फिचर क्यामेरा, एयर व्याग, राम्रो म्युजिक सिस्टम, टच स्क्रिन लगायतका सुविधा उपलब्ध छ ।
भत्तपुर र काठमाडौँबाट किन्दा के फरक छ ?
गाडी जहाँबाट किन्दा पनि एउटै हो । हामीले भत्तपुरमा बजारीकरण गरेर स्थानिय ग्राहकलाई सजिलो र सन्तुष्टि दिन खोजेका हौ ।। नयां सोरुम भएको हिसाबले हामीले ग्राहकलाई केहि नयां छुट दिइरहेका हुन्छौ । स्किम र अफर फरक हुदैन । तर , हामीले दिने सेवा सुविधामा फरक हुन्छ । सेल्स सर्भिस, पाटपुर्जा, टेष्ट ड्राइभको सुविधा, बैंकिङको सुविधा, तुरुन्त एक्सचेन्जको सुविधा हामीले दिरहेका छौ । जुन अरु सोरुमहरुले दिएका हुदैनन् ।
यहाँ कुन व्राण्डका गाडी कति देखि कति मूल्य सम्मका छन् ?
रेनोमा हामीसंग २२ लाख २३ हजार देखि सुरु भएर क्याप्सचरको ६५ लाखका ६ एयर व्याग भएको प्लाटिन डिजेल गाडी छ । क्विडमा २२ लाख २३ हजार, २२ लाख ७३ हजारको रेन्जका गाडी छन् । डस्टरमा ३७ लाख ७८ हजारबाट सुरु भएर ५८ लाखको मुल्यका पेट्रोल गाडीहरु उपलब्ध छन् । फोर्स मोटर्समा पिकअप २० लाख ७५ हजार जुन पिकअप गाडीमा सबैभन्दा सस्तो गाडी हो ।
जसको ग्राउण्ड क्लियरेन्स क्षमता एकदम एकदम राम्रो छ । माइलेज राम्रो छ । ३ टन सम्म समान बोक्ने क्षमता छ । फोर्सको गाडीमा हुने मुख्य सुविधा भनेको ३ लाख किलोमिटर र ३ वर्ष सम्मको वारेन्टी छ । जुन कुनै पनि कमर्सियल गाडिमा छैन । क्रुजर १४ सिट क्षमता को जिप हो । जुन नेपालमा सबैभन्दा बढि सिट क्षमता भएको जिप हो । अरु कम्पनीका जिप ९ / १० सिट भन्दा बढि क्षमताका हुँदैनन् । त्यसैले फोर्स गाडीका ग्राहकको आम्दानी अन्य गाडीको भन्दा राम्रो हुन्छ ।
बैंक मार्फत गाडी लिँदा पहिला कति प्रतिशत पेमेन्ट गर्नुपर्छ र किस्ताको समय कति वर्षको हुन्छ ?
अहिले बैंक मार्फत गाडी लिँदा ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट सुरुमा गर्नुपर्छ । अहिले बैंक हरुले कम व्याजदरमै १० वर्षसम्म वा कुनैले निश्चित मापदण्ड पुर्याएर १५ वर्ष सम्मको लागी ऋण दिन्छन् ।
तथ्याङ्क हेर्दा पहिले भन्दा अहिले गाडी किन्नेको संख्या कम देखिन्छ , किन घटेको होला ?
हो । अहिले तथ्याङ्क हेर्दा गाडीको बिक्री केहि घटेको देखिन्छ । बजार झन् बढ्दै जानुपर्ने ठाउँमा घट्नु पक्कै पनि राम्रो हैन । सरकार र राष्ट्र बैंकका नीति नियमले पनि यसको विक्री केहि घटेको हो । अटो क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलनको स्रोत हो । तर, यहि क्षेत्रलाई अपेक्षा गरेर अटोे क्षेत्रनै कमजोर हुने गरि नीति नियम बन्दा यो क्षेत्रलाई असर पुगेको छ । सरकारले भन्सारमा ५ देखि ३० प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेको छ । जसले एउटै गाडिमा ३० / ३५ लाख सम्म मूल्य वृद्धि हुने भयो । ग्राहकमा पनि यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा मैले गाडी किन किन्ने भन्ने सोच उत्पन्न भएको छ । त्यसैले विगतमा भन्दा केहि घटेको तर धेरै घटेको पनि छैन ।
सरकारी क्षेत्रबाट अटो क्षेत्रको के छ अपेक्षा ?
विकास निर्माणका काम राज्यले प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्यो । विकासको यो प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । बिकाश निर्माण एवंम सफा र सुरक्षीत सडक बनाउन जोड दिनु पर्यो । , सहुलियत दरमा आयात गराउनु पर्यो ।, नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने ब्यबस्था बनाउनु पर्यो । काम नहुने प्रणाली र संरचना बोकेर कतिन्जेल यसैको पछाडि लाग्ने ? हाम्रो चिन्ता भनेको भ्रष्टाचार नहोस भन्ने हो ।
G. Motors ले संख्यात्मक रुपमा कुन व्राण्डका कति गाडि बिक्री गरिरहेको छ ?
हामीले अहिले मुख्यत रेनो र फोर्स गाडी विक्री गरिरहेका छौ । हामीले अहिले दुई वटा व्राण्डका झण्डै २५/ ३० प्रकारका गाडीहरु विक्री गरिरहेका छौ ।
कमर्सियल गाडीमा अरु कम्पनीका ९/ १० सिटका गाडी छन्, फोर्सले १४ सिटे गाडि विक्री गरिरहेको छ, के छ ग्राहकको प्रतिक्रिया ?
हामी १४ सिटे गाडिको बजारिकरणमै छौ । उस्तै मुल्यमा ९ सिटे गाडि किन्न र १४ सिटे फोर्स गाडि किन्दा ग्राहकलाई ५ जना बराबरको आम्दानि बढ्ने भयो । हामीले दशैँ अफरमा ३५ लाखमा ३ लाख लिकोमिटर र ३ वर्षे वारेन्टी दिएका छौ । जुन फोर्स मोटरको बलियो पक्ष हो । जुन अरु कुनै पनि व्राण्डका गाडिमा छैन । २३५ एम एम ग्राउण्ड क्लियरेन्स क्षमता छ जुन कमै कमर्सियल गाडिमा हुन्छ । हामीले जति ग्राहकलाई यसका विशेषता बताएका छांै । उहाँहरु कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।
यो प्रोडक्ट बजारमा आएको कति भयो ?
यो बजारमा आएको २ वर्ष भयो । हामीले गाडीको बिक्रि गर्न थालेको चाँहि १ वर्ष भयो । यो छोटो समयमै हामीले ४० वटा फोर्स गाडि बजारमा पठाइसकेका छौं । जुन संख्यात्मक हिसाबले एकदमै राम्रो हो ।
G. Motors ले यो क्षेत्रमा दिएका सेवा सुविधा बताइदिनोस न ?
हामीले फोर्स मोटरमा ग्राहकलाई बैंकक ,वाली टुरको अफर दिएका छौ । निशुल्क सर्भिसमा पनि अन्य सोरुमले दिने भन्दा बढि सर्भिसको सुविधा दिएका छौ। स्पेयर पार्टसमा पनि छुटको व्यवस्था गरेका छौं । झन्झट फ्री फाइनान्सको सुविधा दिएका छौ । यी कुराहरु हाम्रो सोरुमले दिने सुविधा हुन् जुन अरु सोरुमहरुले दिएका हुदैनन् ।
G. Motors कम्पनिबाट कति जनालाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ ?
फोर्सको सोरुम गठ्ठाघरबाट पाँच जना, रेनोको सोरुम सल्लाघारीबाट छ जना र इटहरीबाट चार जनालाइ हाम्रो कम्पनिबाट रोजगारी दिइरहेका छौ ।
यो व्यवसायबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यतिले मात्र सन्तुष्ट भयौं भने जहाँ सोचेका छौं । त्यहाँ हामी पुग्दैनौ तर पनि केहि सन्तुष्ट त छौं । भविष्यमा जी मोटर्स यी ब्राण्डसंगै अरु ब्राण्डसंग पनि जोडिन सक्छौं । हामी इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा पनि काम गर्ने सोचमा छौं । त्यसैले म यत्तिमै सन्तुष्ट छैन र हुने अवस्था पनि छैन ।
अन्त्यमा : ग्राहकहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
दशैँ आइसकेको छ । यदि तपाई गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने जी मोटर्सको सोरुममा आउनुहोस् । सेवा सुविधा बारे बुझ्नुहोस् । हामि तपाईलाइ तुरुन्तै गाडि दिन सक्ने अवस्थामा छौं । बैंकबाट गाडी लिनुहुन्छ भने पनि डकुमेण्टेसन पुरा भए लगत्तै गाडी दिन तयार छौं । हाम्रो बैंकिङ्ग च्यानल राम्रो छ । हामीले ग्राहकहरुलाई सक्दो छुट र अफर दिएका छौं । रेनो र फोर्स दुबैमा छुट लगायत विदेश भ्रमणको अफर पनि दिएका छौं । गाडी किन्दा अफर मात्र हैन भबिस्यको प्रतिफल रआरामदायी सुविधा पनि हेर्नुपर्छ । यदि तपाईहरु गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो दशैँ तिहार एवंम छठ सम्म अफर लिन ढिलो नगर्नुहोस । अफर संगै सस्तो मुल्यमा गाडी किन्ने मौका नगुमाउनु होस् ।
२०७५ असोज ९ गते प्रकाशित ।